- यसरी निरीह बन्दैछ प्रहरी संगठन
यसरी निरीह बन्दैछ प्रहरी संगठन
जनतासँग सुरक्षाको विषयमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नेपाल प्रहरी यतिबेला निरिह बन्दै गएको छ । त्यही काम गर्ने अधिकृतदेखि जवानसम्म हिड्छन्, बोल्छन् र स्वास पनि फेर्छन् । तर, दुर्भाग्य जानेर होस् वा नजानेर प्रहरीलाई निरिह र अशक्त बनाउन खेजिएको छ ।
यसअघिका नेतृत्वकर्ताले संगठनलाई भन्दा व्यक्तिलाई महत्त्व दिन र अगाडि बढाउन खोजेकाले लामो समयदेखि प्रहरीभित्रको बढुवा जाम भएर बसेको छ । नेपाल प्रहरीमा सेवा गरेपछि आफ्नो भविश्य उज्जल देख्ने अधिकारीहरुको सपना चकनाचुर पारिएको छ । नेपाली जनतालाई सुरक्षा दिने क्रममा आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर काम गरेका प्रहरीका अधिकृतहरु निरिह भएका छन् ।
। फौजी जीवनसँगै जनतासँग होस्टेमा हैँसे गर्दै अगाडि बढ्ने हजारौँ सफल दर्जाका प्रहरी पनि निरास भएका छन् । सबै प्रकृया पुरा गरेर बढुवाको आशामा बसेका तलदेखि माथि सम्मका प्रहरीलाई यसरी निरास पारिँदा त्यसले सुरक्षामा कस्तो असर पर्ला ? त्यस तर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जान सकेको छैन ।
नेपालको इतिहासमा प्रहरीका सबै कर्मचारीहरु यसरी निरास हुनुपरेको सायद पहिलो पटक हो । केही समय अघिसम्म बिना हराएको मृग जस्तै भएको प्रहरी संगठनले नेतृत्व पाएपछि थोरै भए पनि राहत महसुस गरेको छ । पूर्व नेतृत्वकर्ताले आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दु नबनाएर संगठनलाई बनाएको भए सायद यति ठूलो नैरास्यता र चिन्ता लिनु पर्ने थिएन ।
हामी भन्नुपर्नेमा ‘म’ प्रवृत्तिले मान्यता पाएकै कारण यस्तो स्थिति आएको हो । नेतृत्वकर्ताले आग्रह पूर्वाग्रह राखेकै कारणले पछिल्लो समयमा प्रहरीभित्र अनेक घटनाले मान्यता पाएको हो । एसियामा अनुसन्धानका हिसाबले सबैभन्दा अग्रपंतिमा रहेको नेपाल प्रहरी र त्यो फोर्सका होनहार प्रहरी अधिकृतको भविस्यमाथि खेलवाड गर्ने काम पनि भइरहेको छ । ‘म’ बनेपछि अरुको के मतलव भन्ने दुरासशय पूर्ण सोचेका कारण जाम भएको प्रमोशनका कारण हजारौं प्रहरीको भविश्य अन्धाकारतर्फ धकेल्ने काम भइरहेको छ । हिजोको तेतृत्वले समयमा बुद्धि पुर्याइदिएको भए र आग्रह पूर्वाग्रह नराखेको भए आईजीपी नियुक्ति यतिसम्म विवादको भुमरीमा फस्ने थिएन । सेवा निवृत्त हुनुभन्दा एक मिनेटअघि कुर्सि नछाड्ने र जाम भएर बसेको बढुवाको फाइललाई पैतालाले च्यापेर राखिँदा आज प्रहरी शारीरिक रुपमा अशक्त जस्तै भएको छ ।
प्रहरीको बढुवा प्रकृयालाई यसरी जाम गर्दै जाने हो भने भोलि आइजीपी नियुक्त गर्दा एसएसपीबाट गर्नु नपर्ला भन्न सकिन्न सशस्त्र प्रहरीमा धमाधम बढुवा गर्ने सरकारले नेपाल प्रहरीको बढुवाको फाइल किन अगाडि बढाउदैन ? प्रहरीको बढुवा अघि बढाउन कुन शक्ति वा केले रोकेको छ त्यो स्पष्ट पार्न जरुरी छ । आज सबै माथिल्ला विभागहरु निमित्तले चलाइरहेका छन् । जीवनभर रगत पसिना संगठनलाई खर्चेका अधिकृतहरु बढुवाको दिन गनेर बस्न बाध्य पारिएका छन् । यही किसिमको कृयाकलापले देशको सुरक्षाको लागि जोखिम मालेरै भए पनि काम गर्छु भन्ने प्रहरीलाई प्रोत्सहन गर्छ त ? मुलुकको राजधानी काठमाडौंको मेट्रोमा फागुन २ गतेदेखि निमित्तले चलाउने स्थिती आएको छ । प्रहरी प्रशिक्षण, प्रतिष्ठान, अपराध अनुसन्धान विभाग, कार्य विभाग, प्रशासन विभाग, मानव स्रोत र महानिरिक्षकको कार्यालयमा अतिरित्त महानिरिक्षकको दरवन्दी छ । सरकारले बढुवा अघि नबढाएका कारण यी सबै विभाग नायब महानिरिक्षकले चलाइरहेका छन् ।
अपराध अनुसन्धान विभागका प्रकाश अर्याललाई सरकारले महानिरिक्षक बनाएपछि त्यो विभाग अहिले वरिष्ठ उपरिक्षकले चलाइरहेका छन् । लागू औषधका प्रमुख जयबहादुर चन्दको आइजी पद सर्वोच्चले खारेज गरेपछि चन्द गृहमन्त्रालयमा हाजिर भएका छन् । लागू औषध व्यूरो पनि वरिष्ठ उपरिक्षक धिरु बस्नेतले चलाइरहेका छन् ।
यसरी निमित्तको भरमा प्रहरी जस्तो संवेदनशील अंगलाई चलाइनु र महिनौदेखि सम्पूर्ण प्रकृया पुरा गरेकालाई बढुवा नगर्नु यो लाजमर्दो र दुःखद अरु हुन सक्दैन । २०६२ सालमा बढुवा भएर प्रहरी निरिक्षक बनेका कैंयौ कर्मचारीलाई बढुवाको जाम नखोलेका कारण आँसु चुहाएर बाध्य भएर सेवा निवृत्त बनाइयो । अहिले पनि त्यो संख्या बढुवाको दिन गनेर ७५ को संख्यामा छ । त्यही वर्ष सेवामा प्रवेश गरेका निरिक्षकसहित झण्डै एकसय जना १२ वर्षसम्म बढुवा कुरेर बस्नु परेको छ ।
पंक्तिकारले माथि उल्लेख गरेझै अबको ११ महिनापछि नेतृत्व गर्ने अधिकृतलाई नीतिगत रुपमा विभागको अनुभव छैन । ती व्यक्ति भोलि मुलुकको महानिरिक्षक बन्ने स्थिती आउँदा त्यसपछिको नेतृत्व जिल्लाको नेतृत्व गर्ने एसपीबाट तान्नुपर्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न । यति ठूलो दर्जागत संरचना भएको ठाँउमा एउटा जवानलाई समयमै हवल्दार हुने उसको अधिकारलाई रोक्नु कहाँसम्मको न्यायोचित कुरा हो ? प्रश्न खडा भएको छ ।
अहिले विभिन्न ठाँउमा भएका नायब महानिरिक्षक भोलि तिनी नै अतिरिक्त भएर चलाउने हुन् भन्ने गलत सोच र चिन्तन राखिएको छ भने त्यो भन्दा तल्लो तहको सोच अरु हुन सक्दैन । बढुवा र कमाण्डले मनोवैज्ञानिक रुपमा ठूलो अर्थ राख्छ । अतिरिक्तले चलाउने ठाँउमा बरिष्ठ उपरिक्षकले चलाउन थाले भने चल्न त चल्ला तर मनोवैज्ञानिक रुपमा कार्य गतिले सफलता पाउन सक्दैन । प्रहरीमा एकले अर्कोलाई दोषारोपण गर्ने आफूबाहेक सबै गलत हुन् भन्ने जुन मनोवृत्ति केही अधिकृतमा छ त्यसैले गर्दा नै चेनअफ कमाण्डमा खिया लागेको हो ।
चेनअफ कमाण्ड हुँदा अन्तत प्रहरीको मनोबल खस्किएको कुरालाई कसैले ढाक्न खोजेर पनि सक्दैन जुन कुरा घाम जतिकै छर्लङ्ग छ । प्रहरीको विगत केही वर्ष देखिएको नेतृत्वको असक्षमताले गर्दा वृत्ति विकासमा अभाव खड्किन थालेको छ । यतिखेर प्रहरी कर्मचारी विभिन्न खेमामा विभाजित छन् त्यसले ल्याएको अनुशासनको उच्छृंखलता हेर्दा आफैभित्र अनुशासनहिन बनेको प्रहरीले कानुनको अनुशासनको घेरालाई तोडेर अपराध कर्म गर्नेलाई कसरी कानुनको दायरामा ल्याउन सक्ला भन्ने प्रश्न आम जनताबाट उठ्न थालेको छ ।
पछिल्ला दिनहरुमा देखिएको भाँडभैलो र सबै प्रकृया पुरा गरेर पनि अधिकारबाट बञ्चित अधिकृतहरु नेतृत्व विकासमा परेको प्रभाव र भोलिका दिनमा पर्न सक्ने भावी नेतृत्वको असरबारे चिन्ता लिन थालेका छन् । भोलिको संगठन हाँक्ने हैसियत राख्ने होनाहार प्रहरी अधिकृतको बढुवाको जाम खोल्नप्रति सरकार यसैगरी उदासिन रह्यो भने सुरक्षामा गम्भीर असर नपर्ला भनेर कसरी आशा गर्ने ?